Fitantanana ny vokatra: Ny fahanginana dia fahombiazana izay matetika tsy mandeha amin'ny laoniny | Martech Zone
Talata, Jona 26, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ho mpitantana vokatra ho an'ny Inc 500 SaaS Ny orinasa dia sady nahafa-po no tena nahagaga.
Nanontaniana aho indray mandeha raha misy toerana hafa ao amin'ilay orinasa tiako hananana… raha ny marina, tsy misy toerana tsara kokoa noho ny Product Manager. Miahiahy aho fa manaiky ireo Product Managers ao amin'ny orinasa rindrambaiko hafa. Raha manontany tena ianao hoe inona no ataon'ny Product Manager dia miovaova arakaraka ny orinasa ny famaritana ny asa.
Amin'ny orinasa sasany, ny Mpitantana ny vokatra dia mibaiko sy manana ny vokatrao ary tompon'andraikitra amin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'io vokatra io. Amin'ny asako dia misy Mpitantana ny vokatra mibaiko, manome laharam-pahamehana ary manampy amin'ny famolavolana endri-javatra sy fanamboarana eo amin'ny sehatry ny fampiharana izay andraikiny.
Golden ny fanginana
Ny fahombiazana dia tsy azo refesina mivantana mivantana amin'ny dolara sy cents. Izy io dia matetika refesina amin'ny fahanginana. Ny dolara sy ny cents dia hilaza aminao ny maha-mifaninana ny endri-javatra misy anao eo amin'ny sehatry ny indostria, fa ny fahanginana no refin'ny fahombiazana anatiny:
Fahanginana avy amin'ny ekipa Fampandrosoana izay mamaky ny Requirements and Use Cases anao ary afaka mahatakatra sy mampihatra azy ireo.
Fahanginana avy amin'ny Teams Marketing izay mahatsapa ny lanjan'ny vokatrao ary afaka maneho izany amin'ny fitaovana.
Fahanginana avy amin'ny Sales Teams izay sahirana mivarotra amin'ny prospect izay mila ny fiasao.
Fahanginana avy amin'ny ekipa Implementation izay mila manazava ny endri-javatrao sy mampihatra izany amin'ny mpanjifa vaovao.
Fahanginana avy amin'ny ekipan'ny Serivisy ho an'ny mpanjifa izay tsy maintsy mamaly ny antso an-tariby sy manazava ireo olana na fanamby mifandraika amin'ireo fiasao.
Fahanginana avy amin'ny ekipa Operation Product izay tsy maintsy miatrika ny fitakiana apetraky ny fampiasao amin'ny Servers sy Bandwidth.
Fahanginana avy amin'ny Team Leadership izay tsy voasakantsakan'ny mpanjifa manan-danja mitaraina amin'ny fanapahan-kevitrao.
Ny fahanginana matetika mandeha tsy voavadika
Ny olana amin'ny fahanginana dia mazava ho azy fa tsy misy mahita izany. Tsy azo refesina ny fahanginana. Ny fahanginana matetika dia tsy ahazoana tombony na fampisondrotana. Nandalo famoahana lehibe maro aho izao ary nahazo fahanginana. Ny fiasa tsirairay niarahako niasa tamin'ny Teams Fampandrosoana handrafetana sy hampiharana dia niteraka fivarotana fanampiny ary tsy nisy fitomboan'ny olan'ny mpanjifa.
Tsy mbola nekena ho amin'izany aho… fa tsy maninona aho amin'izany! Matoky kokoa ny fahaizako mihoatra ny taloha aho. Raha mangina ny fiafaran'ny rambony dia afaka manome toky anao aho fa misy tabataba bebe kokoa eo amin'ny farany. Ny fahombiazan'ny Product Manager dia mitaky fitiavam-po sy fitakiana mahatalanjona amin'ny dingan'ny famoahana sy ny sori-dalana. Amin'ny maha-Product Manager anao, matetika ianao no mahita ny tenanao mifanohitra amin'ireo Product Manager, Mpitarika, Mpampivelatra ary na dia miaraka amin'ny mpanjifa aza.
Raha tsy mahatanty ny famakafakana sy ny fanapaha-kevitrao ianao dia mety hampidi-doza ny mpanjifanao, ny vinavinanao ary ny hoavin'ny orinasanao sy ny vokatrao. Raha milaza fotsiny ianao hoe eny amin'ny fitakiana fitakiana na fitakian'ny mpanangana dia azonao atao ny manimba ny traikefan'ny mpanjifanao. Matetika ianao dia afaka mahita ny tenanao na dia mifanohitra amin'ny lehibenao sy ny mpiara-miasa aminao aza.
Tsy asa ho an'ny rehetra ny fitantanana ny vokatra!
Fanerena be izany ary mitaky olona afaka miasa amin'izany tsindry izany ary mandray ny fanapahan-kevitra sarotra. Tsy mora ny mijery ny tarehin'ny olona ary milaza amin'izy ireo fa mifindra amin'ny lalana hafa ianao ary maninona. Mitaky mpitarika matanjaka izay hanohana anao sy hampamoaka anao ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazan'ny vokatrao. Mpitondra matoky anao handray fanapahan-kevitra mety.
Mila fankasitrahana ny fahanginana koa izany.
Jun 26, 2007 ao amin'ny 7: 10 PM
Tsy afaka niombon-kevitra taminao intsony aho. Ny PM tsara indrindra dia ireo tsy mahazo fankatoavana.
Jun 27, 2007 ao amin'ny 6: 51 PM
Doug dia nofantsihanao tamin'ity lahatsoratra ity. Na dia maniry hevitra aza ny sasany (izaho), ny fahanginana dia endrika fanehoan-kevitra izay matetika tsy raisina. Ary ny fanekena? Ny fahaiza-manaon'ny HR tsotra dia tsy hitan'ny mpitantana maro, tsy manadino ny mety ho fiantraikan'ny fanehoan-kevitra tsotra tsotra ho an'ny mpiasany.
Jun 28, 2007 ao amin'ny 8: 57 PM
Mahaliana! Tsy misy fankasitrahana sy fahanginana no tsara noho ny ekena ho ilay lehilahy nanimba ny zava-drehetra – sady nanao tabataba be. Mbola hanana asa ianao ny maraina! Saingy, mbola mila mitabataba ianao, ataovy izay ho fantatry ny olona fa mbola mandaka ianao.
12 Okt 2008 amin'ny 8:43 PM
Tompoko, ny fahanginana ho ahy dia toetra iray izay tsy dia misy dikany loatra. Ny valisoa ho an'ny fahanginana dia voafaritra fa raha mifanaraka amin'ny toetra sy ny asa vitan'ilay olona izany… Na eo amin'ny sehatry ny Fampandrosoana ny vokatra izany na ny hafa…